Goku oo ka socda Dragon Ball waa qaabkan Studio Ghibli ah | Abuurista khadka tooska ah
Sidoo kale Goku wuxuu ka socdaa Dragon Ball Studio Ghibli style
Daqiiqado aad u wanaagsan Son Goku ayaa na siiyay safarkiisa oo uu ku dhex marayo kuwa loo yaqaan 'Dragon Balls' oo sixray jiillo dhawr ah tan iyo markii laga daawaday telefishanka markii ugu horeysay dalkeena horaantii 90-meeyadii.
Hadda farshaxanka Go Gap ayaa Studio Ghibli siiyay qallooca isagoo sawiraya Wiilka weyn Goku sida oo kale. Hindise lagu kasbaday sacab taageerayaal badan runtiina ma ahan mid xun haba yaraatee. Gaar ahaan inbadan qeybtaas "duurjoog" yar taasna waxay kusii dhowaan kartaa Princess Mononoke.
Go Gap sidoo kale wuxuu lahaa raaxo leh inuu sawiro Son Goku awoodiisa gaarka ah ee super warrior, oo wali ku nool filashooyinka qof dabeecad leh boqolaal kun oo taageerayaal ah oo adduunka ku baahsan.
Fiyuus muxuu ahaa Akira Toriyama iyo Studio Ghibli Ma ahan wax fudud oo halkan waxay umuuqataa in farshaxankan uu helay fure sax ah oo uusan ka careysiinin kuwa raacsan ee Dragon Ball, iyo in kuwa jecel filimada animation Ghibli aysan xanaaqin sidoo kale; had iyo jeer waxaa jira dadaallo qaali ah sida sanduuqa buluugga ah.
Sidoo kale waxyooday qaar ayaa ka imanaya Naruto Sidaad u aragto, in kasta oo Goku loo ekeysiiyay inuu ka dhigo qof bini aadam ah kana saaro meeshaas superhero ka weyn ee aan dhammaanteen u wada barannay. Jid ahaan, waxay ahayd waqtigii Akira Toriyama weyn inuu dhex maro xariiqyadan oo yaa dhaliyay soo jiidashada ugu xiisaha badan tobanaan sano; kaliya maahan Dragon Ball, laakiin sidoo kale sababtoo ah waxay dejisaa astaamaha Dragon Quest, taxane ah ciyaaraha RPG oo si ballaaran looga aqbalay Japan.
Hada waad awoodaa ku raaxayso in ka sii dadnimo badan Goku ilaa Studio Ghibli; and by the way ogow muxuu filimka cusub usii dheeraanayaa istudiyaha animation-kan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sidoo kale Goku wuxuu ka socdaa Dragon Ball Studio Ghibli style
Sidee bey Yoda u noqon laheyd (nasiib wanaagse ma aheyn)